Shirkadda Dhaweeye oo Abaal-marisay Shaqaale Karti iyo Hufnaan lagu majeertay | Somaliland Post
Home News Shirkadda Dhaweeye oo Abaal-marisay Shaqaale Karti iyo Hufnaan lagu majeertay
Hargeysa (SLpost)- Shirkadda adeegga casriga ah ee Gaadiidka dadweynaha ee Dhaweeye, ayaa abaal-marinno kala duwan ku maamuustay Shaqaalaha ka hawl-gala shirkadda ee kartida shaqo iyo hufnaanta muujiyey sannadkii hore.
Munaasibad miisaan leh oo habeenkii Axaddu soo galaysay magaalada Hargeysa loogu qabtay abaal-marinta Shaqaalaha Dhaweeye, waxa ka qayb-galay masuuliyiin ka socday xukuumadda Somaliland, wakiillo ka socday shirkadaha dalka qaarkood, Shaqaalaha shirkadda iyo Marti-sharaf kale.
Waxa munaasibadda hadallo ku saabsan ujeeddada loo qabtay iyo muhiimadda ay shaqaalahooda iyo shirkad ahaanba u leedahay ka jeediyey Guddoomiyaha Shirkadda Dhaweeye Cabdiqani Maxamed Xaaji Yuusuf iyo madaxa Suuq-geynta iyo Xidhiidhka dadweynaha Faarax Ayaanle Dayax-weerar.
Guddoomiyaha shirkadda Dhaweeye Cabdiqani Maxamuud Xaaji Yuusuf ayaa sheegay in dhalinyaradu hormuud ka tahay tiirar ay ku taagan tahay iyo baalasha ay shirkadda Dhaweeye ku duusho, waxaana hadalladiisa ka mid ahaa, “Dhalinyarada Dhaweeye waa tirarka ay ku taagan tahay shirkaddu waana koox wada da’ yar ah marka aniga layga reebo, dhammaantood da’doodu 25-jirka ayay ka hoosaysaa”.
Farax Ayaanle Dayax-weerar oo ah masuulka shirkadda u qaabilsan suuq-geynta iyo Xidhiidhka Dadweynaha, ayaa faahfaahin ka bixisay tirada shaqaalaha shirkadda ee munaasibadda lagu maamuusay, waxaanay tidhi, “Xafladdan waxa lagu abaal-marinaa 13 qof oo kala socda qaybaha kala duwan ee adeegga Dhaweeye ka kooban yahay, waxa kale oo la abaal-marin doonaa timamka adeegga Dhaweeye ka wada gobollada dalka sida Berbera, Boorama, Laascaanood, Burco, Ceerigaabo iyo guud ahaan Somaliland inta ay ka kooban tahay oo dhan.”
Madaxa Suuq-geynta iyo Xidhiidhka Dadweynaha ee shirkadda Telesom Cabdiwahaab Maxamed Xuseen, ayaa madasha ka jeediyey weedho tilmaamaya muhiimadda ay abaal-marinta iyo Qiimeynta Shaqaaluhu u leedahay shirkadda.
“Marka laga hadlayo shirkad guulaysata, guusheeda koowaad waa cududda shaqaalaha ee shirkaddaasi leedahay – siday ugu qanacsan yihiin shaqada ay hayaan ama sida ay u soo saaraan waxqabadka shaqada ay hayaan. Waxaana la yidhaa hantida ama raasamaalka ugu weyn ee shirkadi leedahay waa shaqaalaheeda, shirkadina shirkadda ay ka shaqaale wanaagsan tahay ma gaadho. Waxaas oo dhamina waxay ku yimaaddaan daryeelka, tixgelinta iyo karaamaynta qofka shaqaalaha ah.” Sidaas ayuu yidhi Cabdiwahaab.
Xamse Cumar ku-joog oo ka socday shirkadda Telesom, ayaa ka markhaati-kacay muhiimadda adeegyada Dhaweeye u leeyihiin bulshada, waxaanu yidhi, “Waxaan qirayaa in dhammaan adeegyada Dhaweeye ku yimaaddeen baahi bulshadu qabto. Dad baa ka faa’idaysta, faa’idada bulshadu ku qabtona waxa uu qofku garan karaa marka uu adeegsado.”
Guddoomiyaha gobolka Maroodijeex Jaamac Maxamuud iyo Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Gaadiidka Cumar Sayid Axmed, ayaa shirkadda Dhaweeye ku boggaadiyey wax-qabadka ay bulshada u samayso.
“Waa shirkad adeeg wanaagsan oo la mahadiyey ku soo kordhiyey bulshada Somaliland. Adeeggaas oo runtii ah adeegyada ugu casrisan ee ka jira dunida. Faa’idooyin badan ayay bulshada u leedahay, shaqo-abuurka way samaysay. Shirkadda Dhaweeye waxay ka mid tahay shirkadaha sida weyn noola shaqeeya,” sidaas waxa yidhi Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Gaadiidka iyo Horumarinta Jidadka Cumar Sayid Axmed.
Guddoomiyaha gobolka Maroodijeex Jaamac Maxamuud ayaa shirkadda Dhaweeye ku bogaadiyey adeegga casriga ah ee ay dalka ku soo kordhisay, waxaanu yidhi, “Waxaan u mahad-naqayaa shirkadda dhaweeye oo runtii ku soo kordhisay dalka barnaamij casri ah oo faa’idooyin badan oo kala duwan leh. Aniga laftigaygu waxaan ka mid ahay macaamiisha Dhaweeye. Haddii aad System-ka gashaan waxaad ku arki doontaan in badan oo aan raacay Dhaweeye gelinka dambe iyo habeenkii maadaama oo aanu inta badan ka shaqaynayo nabadgelyada, runtii dhinacaas oo qudha ayaanu ka eegnay.”
Gebo-gabadii munaasibadda, masuuliyiinta shirkadda Dhaweeye waxa ay abaal-marinno lagu maamuusay guddoonsiiyeen 13 ka mid ah Shaqaalaha ka hawl-gala adeegyada kala duwan ee shirkadda, kuwaas oo hawl-karnimo iyo hufnaan lagu majeertay.
Shirkadda Dhaweeye oo la aasaasay sannadkii 2018-kii isla markaana xilligan ka hawl-gasha guud ahaan gobollada Somaliland, ayaa noqotay hormuudka shirkadaha bixiya Adeegga Isku-xidhka gaadiidka dadweynaha gaar ahaan tagaasida iyo Bulshada, iyadoo qofku isticmaalayo barnaamijka shirkadda oo Qaab Online ah ama telefoonkiisa gacanta ee Telesom ka dalbadan karo tagsi qaada ama cuntada uu u baahan yahay goobta uu joogo loogu geynayo.
Muuqaalka Hoose kaga bogo Qaabkii ay u dhacday Xafladda Abaal-marinta Shaqaalaha shirkadda Dhaweeye iyo Khudbadihi laga jeediyey oo dhammaystiran